काेरोना महामारीः घरमा बस्नेलाई ९ सुझाव ! | Makalukhabar.com
काेरोना महामारीः घरमा बस्नेलाई ९ सुझाव !
चैत्र ९, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । हालसम्म नेपालमा यसको कुनै लक्षण नदेखिए तापनि भविष्यमा निम्तन सक्ने जटिलताका लागि राज्यसँगै नागरिक आफैँ पनि सचेत र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।
संक्रमण फैलिएका देशहरुले अभ्यास गरेको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको ‘सेल्फ आईसोलेसेन वा क्वारेन्टान’ मा बस्ने हो । यो भनेको आफूलाई घर वा कोठामा राखेर संक्रमणको पहुँचभन्दा बाहिर रहने अभ्यास हो । यो रोग अरुबाट सर्ने रोग हो । अरुको सम्पर्कमै नआएको खण्डमा आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, एक्लै आफूलाई बन्द कोठा वा घरमा राख्दा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने अर्को नकारात्मक पक्ष छ । यसमा केही सावधानी अपनाउने हो भने यो अवस्थाबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामी यी कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ ।
१. धेरैदिन एक्लै एकै ठाउँमा बस्दा हामीलाई आफ्नो दैनिकी या दिनचर्याले सताउन सक्छ । कार्यालयमा जाने, मानिसहरुसँग भेटघाट गर्ने, साथीहरुसँग रमाइलो गर्ने वा अन्य कुनै नियमित काम गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लामो समय एक्लै बस्दा मन र मस्तिष्कमा अनावश्यक कुराहरु खेल्न सक्छन् । त्यसो हुन नदिन फोन वा इन्टरनेटको माध्यमबाट साथी वा परिवारका सदस्यसँत नियमित कुराकानी गर्ने, विभिन्न पुस्तकहरु पढ्ने, फिल्म हेर्ने गर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा हाम्रो ध्यान अन्तै मोडिन्छ र दिमागमा नकारात्मक कुराहरु खेल्न पाउँदैन । अझ उपयोगी पुस्तकले त मोटिभेसनको कामसमेत गर्छ । अथवा, आफूलाई अन्य सिर्जनात्मक काममा लगाउन पनि सकिन्छ ।
२. बिहानभरी सुतेर तपाई १२ बजे उठ्नुहुन्छ र भोक लागेपछि जंक फुड वा जे सहज र छिटो हुन्छ त्यहि खाना खाने गर्नुहुन्छ भने तपाईं गलत गर्दै हुनुहुन्छ । सकेसम्म बासी खानेकुरा पनि नखानुहोस् । यसले गर्दा ग्यास्टिक या अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्तने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले कति बजे उठ्ने, खाना कति बजे खाने, पढ्ने कुन समयमा, इन्टरनेट कतिबेला चलाउने, फिल्म हेर्ने वा अन्य काम गर्ने र सुत्ने कतिबेला भनेर दैनिक रुटिङ बनाउनुहोस् । सोहीअनुसार आफूलाई दैनिकीमा ढाल्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंलाई यही समय र अवस्था प्रिय लाग्न थाल्छ ।
३. व्यायाम र ध्यान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । शारीरिक स्वास्थ्यसँग मानसिक स्वास्थ्य पनि जोडिएको हुनाले सकेसम्म आफूलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, ध्यान गर्दा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भने विकार तथा नकारात्मक भावहरु हराउँछन् । नकारात्मक कुराहरु सोच्नु या खेलाउनु मानसिक स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुन सक्छ । संगीत सुन्दै तपाईं नाच्न पनि सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको आफ्नो जीवन हो यो समयलाई सकेजति इन्जोय गर्नुहोस् । यो समय भनेको अस्तब्यस्त जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर पनि हो, यसलाई खेर नफाल्नुहोस् ।
४. प्रकृतिसँग रमाउनु अर्को उत्तम उपाय हो । सम्भव छ भने बगैंचा या बालकुनीमा बसेर त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई ग्रहण गर्नुपर्छ । या, आफ्नो घर वा कोठाबाट देखिने बाहिरी दृश्यलाई नियालेर रम्न सकिन्छ ।
कुनै रुख वा मन्दिरको सुन्दरता, खोला या हिमाल–पहाडको मनमोहकता, खेतबारी, विभिन्न प्रकारका घरहरु या अन्य कलात्मक चीज, बस्तु या स्थानलाई महसुस गरेर रमाउन सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईं झ्यालबाट आउने स्वच्छ हावा पनि ग्रहण गरिरहनु भएको हुन्छ ।
५. तपाईंलाई कुनै कुरामा रुची या प्यासन छ तर, समय अभाव वा अन्य कारणले त्यो काम पुरा गर्न सक्नुभएको छैन भने यो समयलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै, गिटार बजाउन सिक्न, अभिनय सिक्न वा कुनै ब्लग वा आलेख लेख्न प्रयास गर्न सकिन्छ । आफ्नो दैनिकीलाई डायरीमा टिपेर आजभन्दा भोलि कसरी अझ राम्रो र व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे सोच्नुभयो भने झन् राम्रो ।
६. जतिबेला पनि कोरोना भाइरसको प्रभावबारे समाचारहरु नपढ्नुहोस् । कोरोनाको बारेमा मात्र अपडेट हुन खोज्दा र दिमागमा यही चीजलाई बसाउँदा मनोटोनस हुन सक्छ । फेरि झूटा र अतिरञ्जित गर्ने समाचारहरु पनि आइरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले आधिकारीक संचारमाध्यमले प्रकाशन, प्रसारण गरेका समाचारहरुलाई मात्र विश्वास गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट बच्ने उपाय र अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे दिइएका सूचनाहरु ग्रहण गरेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । तपाईं घरमा सुरक्षित हुनुहन्छ भन्ने सोच्नुहोस् र आशा गर्नुहोस् अरु पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ ।
७. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तपाईंले यो समयलाई आफ्नो आजादीको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । सधैभरको दौडधूप र संघर्षबाट केही दिन बिश्राप लिने समय पाउनुभएको छ । यो समयमा तपाईंले आफू र आफ्नो जीवनलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ । यो समयलाई सही सदूपयोग गरेर फलदायी काममा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईं लेखक वा कलाकार हुनुहुन्छ भने आफ्नो विगतका कामबारे समिक्षा गरेर कमी–कमजोरी पहिल्याउँदै आगामी दिनको योजना बनाउनु सक्नुहुन्छ । जस्तै, कलाकारले आफ्नो पुराना अभिनयहरु हेरेर आनन्द लिने र राम्रा–नराम्रा पक्ष केलाउने, लेखकले आफ्नो पुस्तक पढेर आत्म समिक्षा गर्ने, राम्रा–नराम्रा कुरा केलाउने गर्न सक्छ ।
८. पुराना फोटोहरु हेर्दा पनि रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ । फोन, ल्यापटकमा राखिएका होउन् या एल्बममा । त्यस्तै, आफूलाई मन पर्ने कपडाहरु एक ठाउँमा राख्ने, ती कपडाहरु कहाँ र कसरी किनेको हो सम्झने, आफूले बाल्यकालमा लगाएका कपडाहरु सम्झने गर्नु आफूलाई भुलाउने अर्को उपाय हो । आफ्नो कोठाको व्यवस्थापन गर्ने, साजसज्जा नयाँ तरिकाबाट गर्नेबारे योजना बनाउने गर्दा पनि रचनात्मक कार्य हुन्छ ।
प्रेमी, प्रेमिका या सथीभाइससँगका रमाइला क्षणहरु याद गर्ने गर्दा राम्रा पुराना यादहरुले जिन्दगीमा फेरि ताजकी थपिदिन्छ । आफ्नो कमी–कमजोरी केलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । अघि बढ्न उत्प्रेरणा मिल्छ ।
९. त्यसैगरी हामीले खानामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । घरमा बसेर जंक फुड खाँदै फिल्म हर्ने वा इन्टरनेट चलाउनेमात्र गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । र, तपाईंलाई अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आयो भने तपाईं आइसोलेसनमा बसेको कुनै काम नभन । फलफूलहरु खाने, ताजा खाने कुराहरु खाने गर्नुपर्छ । घरमा छैन भने बजारबाट अनलाइनमा मगाउन पनि सकिन्छ ।
र, अन्त्यमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह–सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्छ । कुनै समस्या भए तत्काल आफ्नो समस्याबारे फो सम्पर्क गरेर कसैलाई सेयर गर्न वा सिधै अस्पतालमा कुरा राख्न सकिन्छ । सानो समस्या पनि हामी आत्तिन सक्छौँ, यसो गर्दा आफ्नो समस्याबारे प्रष्ट हुन्छ । अवस्थाअनुसार द्धरेलु उपचार विधिहरु पनि अपनाउन सकिन्छ ।
(सुझावकर्ता कृष्ण आचार्य उपन्यास ‘अप्रिल फुल’ का लेखक तथा पत्रकार हुन्)
चैत्र १०, काठमाडौं । अहिले नेपालको अवस्था जस्तो छ, १५–२० दिन अगाडि इटालीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । सरकारले हरेक ठाउँमा बन्द गरेको थियो । मानिसलाई काम नपरी बाहिर ननिस्कन भनेको थियो । साबुनपानीले हात धुन, मास्क लगाउन भनेको थियो ।भेला नहुन भनेको थियो, घर भित्रै बस्न भनेको थियो । तर, अहिले हामीले कोरो... जारी राख्नुहोस...
पटकपटक फुट र जुटको श्रृंखलाबाट गुज्रेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुनः एकिकृत भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा परम्परागत मुल्य मान्यताको जगमा खडा भएको राप्रपाको एकिकरण पश्चात स्वभावतः सामान्य भएपनि केही तरंगहरु देखा परेका छन्। एकताको पृष्ठभूमि तथा भविष्यको संभावनावारे थुप्रै आशंका र आकलनहरु दे... जारी राख्नुहोस...
काेराेना भाइरस संक्रमणः अस्पताल तथा क्लिनिकमा सकभर नजाऔं
अहिले मौसमी रुघाखोकी फैलिएको छ | रुघा लाग्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सिंगान आउने, नाक बन्द हुने लगायतका लक्षण मौसमी रुघाखोकीका लक्षण हुन् | मौसमी रुघाखोकीलाई खासै उपचारको आबश्यकता हुँदैन | झोलिलो खाना खाने, ज्वरो आउँदा सिटामोल खाने, रुघाखोकीको सामान्य औषधि खाने तथा घरमै बस्ने गरेमा यो फ्लु ४-५ दिन... जारी राख्नुहोस...
बेनी आक्रमणका साक्षी भन्छन्– ‘स्थानीय अझै त्रसित छन्’
चैत्र ७, काठमाडौं । २०६० सालको चैत्र ७ गते राति करिब साढे १० बजेतिर बेनी बजारमा भिषण युद्ध चल्यो । बम–बारुद पड्किएको आवाजहरु सुनिन थाल्यो । राति करिब ९ बजेतिर नामको अगाडि कम्रेड लगाएर गरिएका सम्बोधनहरु सुनिन थालेका थिए । मेरो घरको कोठाबाट त्यो आवाज सुनिन्थ्यो । आक्रमण हुने लक्षण देखेपछि मैले आफूले क... जारी राख्नुहोस...
अभिभावक थरीथरीकाः कसैलाई सन्तान प्यारो, कसैलाई परीक्षा !
चैत्र ६, काठमाडौं । दुई–चार हप्ता अघिसम्म एसईई परीक्षा तोकिएकै समयमा ‘एनि हाऊ, सञ्चालन गराऊँ’ भन्ने पक्षमा थियो सरकार । हिजो (बुधबार) दिउँसोसम्म पनि सरकारको निर्णय थियो– ‘विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय सबै तत्काल बन्द गर्ने, एसईई यथावत् !’ सो निर्णय लगतै अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षाविद् लगायत... जारी राख्नुहोस...
घण्टी नबजाई आएको संकटबाट बच्न सबैको सहकार्य आवश्यक
विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट अहिलेसम्म करिब आठ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ । १ सय ६५ बढी देशमा पुगिसकेको कोरोनाबाट २ लाख १९ हजार ३ सय ८५ जना संक्रमित भएको बिहीबार बिहानसम्मको तथ्याङ्कले देखाउँछ । छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको भाइरस हाम्रो देशको अर्काे ठूलो छिमेकी देश... जारी राख्नुहोस...
अलेक्जेण्डर महान विश्व विजय गर्दै भारत वर्ष पुगेका थिए । भारतबाट फर्कन लाग्दा चिनोका रुपमा एकजना ज्ञानी सन्त लैजाने विचार गरेर आफ्ना सैनिकलाई सन्त खोज्न निर्देशन दिए । सैनिकहरु सन्त खोज्दै डण्डामिसको झुपडी पुगे । उनीहरुले कडिकडाउपूर्वक सम्राटले बोलाएको बताए । डण्डामिस त्यसबेलाका ठूला ज्ञानी सन्त थिए... जारी राख्नुहोस...